IFTIINKACUSUB.COM: Qisso: Boqol sanadood maalinna kamaan faaruqin Kabcada Ilahay ee Maka.
Qisso: Boqol sanadood maalinna kamaan faaruqin Kabcada Ilahay ee Maka.
Iftiinkacusub.com: Khayr qofka uu Ilahay la doonayo waxbadan ayuu u fudaydiyaa,iyada oo waxkastaana ay ku xidhan yihiin dadaalkaaga iyo hadba inta aad tamar iyo awood galiso.Boqolaal qof ayaa jira oo deegaan la ah Masjidka baraykaysan ee Maka,hadana waxaa laga yabaa in ay ku adag tahay in ay Masjidka baraykaysan kusoo ciibaadaystaan.
Nin oday ah oo cimrigiisa lagu qiyaasay ku dhawaad 127 sanadood, ayaa waxa uu ka waramay in muddo ku dhaw 100 sano aanu marnaba ka faaruqin ku tukashada saladaha iyo camalada kale ee khayriga ah ee ka socda.
Waxa kaloo odaygan isaga ah laga so wariyay ,in uu maalinkasta Kabcada Ilahay uu dawaafo 21 jeer ama ka badan,iyada oo ay waliba jirto duruuf caafimaad oo markasta soo foodsaarta,sida indhaha oo aanu si fiican waxba uga arag iyo itaaltariga dhinaca awooda.
Waxa si aad ah loo tilmamay ,in odaygan isaga ah, uu gurigiisu Kabcada Ilahay u jiro wax ka yar 7 Km,taasi oo ay dhici karta in ay waxyaabo badan u sahasho,marka laga tago jacaylka iyo rabitaanka uu u hayo baydka Ilahay, kasi oo uu rajaynaayo in Ilahay ugu danbi dhaafo.
Waxa kaloo uu odaygani hadda sheegay, in wakhtigan iminka ah ay lasoo daristay awoodaro dhinaca jidhka ah,waana mida keentay ayuu yidhi in aan tahli waayo ama aan gaadhi waayo in aan Xaramka kusoo cubaadaysto.
Ilahay waxa aynu ka baryaynaa in uu inaga dhigo kuwo u dadaala acmaasha iyo cibadada Rabbi uu inagu waajibiyay,la'aanteedna aanay wax inoo suura galayaa anay jirin haddii aynaan ku dadaalin,iskana yaran dhamaan waxyabahan kale ee nolosheenii mashquulka ka dhigay.